အငယ်ဆုံး Sehun လေးကို လွမ်းလွန်းလို့ လေယာဉ်ပေါ်မတက်ခင် Ph လှမ်းဆက်ခဲ့တဲ့ Lay
Sehun ဟာ SM က စီစဉ်တဲ့ SM Super Idol League အစီအစဉ်မှာ fan တွေနဲ့အတူ LOL game ကစားရင်း fan တွေမေးတဲ့ မေးခွန်းတွေပါ ပြန်ဖြေပေးခဲ့ပါတယ်။ Sehun က အရင်ဆုံး Game အဖွင့်မှာ ခုလို မိတ်ဆက်စကားဆိုခဲ့ပါတယ်။
“အကုန်လုံးသိတဲ့အတိုင်းဘဲ…. ကျွန်တော်ရိုက်ကူးနေတဲ့ Pirates 2’ ဇာတ်ကားဟာ ဒီနှစ်အစမှာ ရိုက်ကူးလို့ပြီးစီးသွားခဲ့ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့တပတ်ကတော့ ‘Now, We Are Breaking Up’ drama ရိုက်တာ ပြီးသွားခဲ့ပါပြီ။ ခု .. အားလုံးနဲ့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဆော့လို့ရအောင် ကျွန်တော် Huya TV ကို ပြန်လာခဲ့ပါပြီ”
Fan တစ်ယောက်ကတော့ “Oppa ,, ဘာလို့ weight တွေ အရမ်းကျသွားတာလည်း ? လို့ မေးခဲ့ပါတယ်။ Sehun က “ဟုတ်တယ်.. ကျွန်တော် weight ကျသွားတယ်။ Drama အတွက်ရိုက်ကူးရင်း weight ကျ သွားတာပါ။ ကျွန်တော်ကလေ ပုံမှန်အားဖြင့် Weight သိပ်မတက်ပေမဲ့ ခုလို weight ကျသွားတော့ တော်တော်အံ့ဩမိတယ်” ဆိုပြီး ပြန်ဖြေခဲ့ပါတယ်။
Fan တစ်ယောက်ကတော့ Lay ရဲ့ drama အသစ်နဲ့ ပက်သက်ပြီး “Lay ရဲ့ ဇာတ်ကား ကြည့်ပြီးသွားပြီလား” လို့မေးတဲ့အခါမှာတော့ Sehun က “No.., ကျွန်တော် မကြည့်ရသေးဖူး။ ဘယ်လိုကြည့်လို့ရနိုင်မလည်း.. Korea မှာပါ ကြည့်လို့ရနေပြီလား?? လွန်ခဲ့တဲ့ငါးရက်ကတော့ ကျွန်တော်တို့အဆက်အသွယ်ရှိခဲ့ကြတယ်.. သူလေယာဉ်ပေါ်မတက်ခင် ကျွန်တော့်ကို လွမ်းလို့ဆိုပြီး ရုတ်တရက် Ph လှမ်းဆက်ခေါ်ခဲ့တယ်” ဆိုပြီး သူ့အကို Lay နဲ့ ပက်သက်ပြီး ပြန်ဖြေခဲ့ပါတယ်။
EXO အဖွဲ့ဝင်9ယောက်ထဲကမှ Lay ဟာ Soloist အဖြစ် China မှာ ရပ်တည်နေပေမဲ့ သူ့ member တွေကို တကယ့်စိတ်ရင်းနဲ့ အမြဲသတိတရနေတဲ့သူပါ။ သူတို့တွေ လူချင်းတွေ့တဲ့ moment ဟာ ရှားပေမဲ့ ခုလို moment လေးတွေကတော့ ခဏခဏ တက်လာတာမို့ OT9 stan EXO ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ ကျေနပ်ပျော်ရွှင်ကြည်နူးနေမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
Next ချစ်ရသူလေးကို အရိပ်တကြည့်ကြည့်ရှိတဲ့အပြင် အားလုံးရှေ့မှာပဲ ပေါ်တင်ချစ်ပြနေတဲ့ Luhan »
Previous « Oh My Girl ရဲ့ Album ကို ကူးချသုံးစွဲကြောင်း သက်သေတွေနဲ့တကွ ဝေဖန်‌ခံနေရတဲ့ Zhao Lusi
BTS အဖွဲ့ဝင်​တွေရဲ့ ​ပြောကြားချက်အရ သူတို့နဲ့ ပတ်သက်ပြီး လူ​တွေမသိ​သေးတဲ့ အချက် ၇ ချက်